Fans na mkpọtụ ha mgbe ha na-agba ọsọ na Mac anyị Esi m mac
Fans na mkpọtụ ha mgbe ha na-agba ọsọ na Mac anyị
Obi abụọ adịghị ya, mgbe oge okpomọkụ ruru, ndị ọrụ niile na-anwa ịbawanye nkasi obi nke ụlọ ma ọ bụ ọfịs anyị ma were ohere rụọ ọrụ n'èzí. Nke a na priori nwere ihe ọma karịa ihe ọjọọ maka anyị, ọ nwere ike ịbụ nsogbu maka Macs anyị.
N'ezie, kọmpụta niile, ma ọ bụ na ọfịs ma ọ bụ n'ụlọ, na-adịkarị mfe ịnweta ntụ na ọtụtụ kọmputa ndị nwere ndị Fans dịka MacBook Pro, iMac, Mac mini, wdg. N'ụzọ ezi uche dị na anyị agaghị ewere iMac gaa ogige iji rụọ ọrụ, mana anyị na-eme ya mgbe niile na MacBook na ọ bụ ya mere anyị kwesịrị ịkpachara anya soro ha ma ọ bụrụ na anyị achọghị ka ndị agba bọọlụ malite mkpọtụ.
Ugbu a 12 ″ MacBook Retina anaghị eji Fans maka obi jụrụ n'ime mmiri, ma nke a apụtaghị na ekwesighi ihicha ájá na unyi. Ugbu a n'oge ọkọchị, enwere ekele maka ịnwe nhọrọ nke ịwe akụrụngwa gaa ebe dị iche iche iji rụọ ọrụ ma ọ bụ ihe nkịtị na ndị a nwere ike ịnweta obere unyi karịa ka ọ dị na mbụ.
Iji malite, anyị ga-ekwu na ọrụ ndị Fans na Macs anyị bụ kpọmkwem n'ihi ihe mmetụta na-azaghachi mgbe ha chọpụtara mgbanwe okpomọkụ n'ime akụrụngwa ahụ. Ndị a na-agbakwunye nnupụisi naanị ma ọ bụrụ na anyị nwere mpikota ọnụ vidiyo dị elu, kpọọ egwuregwu nwere nnukwu eserese chọrọ ma ọ bụ kọwaa draịvụ ike na Chakwasa ihie mgbe ị kwagara data. Eeh n'èzí okpomọkụ dị elu na Mac n'elu ya dị na anyanwụNke a na-emetụta akụrụngwa ozugbo na anyị ga-achọpụta na ndị Fans na-aga ngwa ngwa ma na-eme mkpọtụ.
Ndị iku ume Mac na-adị ọcha mgbe niile
N’echiche a, ọ dị mkpa idobe windo Mac niile ka ọ ghara igbochi ha. Mgbe igbochi ọnụ ụzọ ya na unyi ekpokọtara, ụkwụ, ohiri isi, akwa ma ọ bụ ihe yiri ya ikuku ikuku dị obere ya mere ndị Fans ga-aga ọgba aghara dị elu iji mee ka ihe dị n'ime dị jụụ. Inwe ndị iku ume niile dị ọcha na-eme ka mmụba dị elu karịa n'ọnọdụ niile yabụ nweere onwe gị iji nlezianya soro ha.
Mgbe ahụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịsacha Fans n'ime anyị nwere ike ime ya, mana ị ga-aga nzọụkwụ a Mac ga-eme mkpọtụ ma bụrụ ihe iwe (ihe a na-adịghị ahụkebe) yabụ anyị na-akwado ịdebe mputa ahụ ma na-ezere nsogbu nke ime. Unyi bụ ihe na-ejedebe ịbanye na kọmputa niile, mana ọ bụrụ na anyị akpachara anya, anyị ga-agbatị ndụ nke Mac anyị ma chekwaa ego na ndakpọ n'ihi ikpo ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Fans na mkpọtụ ha mgbe ha na-agba ọsọ na Mac anyị
Ekpebiri m ịkwaga PC na Imac i7 site na 2017 mana na oge ikpeazụ amalitere m ịgụ ndị ọrụ ole na ole na-eme mkpesa banyere mkpọtụ nke ndị Fans ọhụrụ Imac i7 2017….
Na PC ochie m anaghị eji fan, m wụnyere igwe ọkụ na-emesapụ aka na ọ dị jụụ 100%, yabụ enwere m nchegbu banyere mgbanwe ahụ enwere m obi abụọ ma m ga-anọ na i5.
Ojiji m bụ nke ụlọ ma ọkachasị Photoshop na ngwa ndị ọzọ maka mmepe foto.
You nweela ike lelee okwu mkpọtụ ahụ? i chere na i5 ga-ezu…?
Ọ bụghị naanị Spain, mana United States na mba ndị ọzọ dị na Europe na-agbasawanye mkpuchi Apple Pay
Esi egbochi Documents na Desktop si syncing na iCloud